Marka arrinta ku saabsan yimaado ciyaaryahan MP4 in android, waxaa jira kumanaan codsiyada laga heli karaa dukaanka play, laakiin qaar ka mid ah waxay leeyihiin cayayaanka, qaar ka mid gaabis ah aad casriga ah iyo qaar ka mid ah waa kaamil ah xallinta welwelka aad ka oo dhan. Qof kastaa wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo ah videos ee telefoonka iyo doonayo in uu meel aan u daawado, mar walba sidaa waxaa jiri waa ciyaaryahan fiican MP4 si ay u ciyaaro. Waxaa jira ciyaaryahan default ay bixiyaan brand kasta oo mobile ah laakiin in mararka qaar aan buuxin waxa aad dalbatay. Sidaas halkan waa 10ka ciyaaryahan ee Android.
Qaybta 1. Top 10 Players MP4 for Android
Qaybta 2. Download MP4 for Android Free la Wondershare AllMyTube
BS.Player ™ u qaybiyaa ciyaaryahan video ah oo lacag la'aan ah multimedia oo loo isticmaalay in ka badan 70 milyan oo qof oo dunida. Kooxda sameeysa ayaa la turjumay app ee 90 luqadood oo caalami ah oo ka dhigaysa hubiyo in app ku egyahay oo aan wax Artur on qalabka oo xoog leh processing yar.
Taageerada noocyada file video ugu oo ay ku jiraan MP4, AVI, FLV, 3GP, MP3, FLAC, iyo wmv, iwm
Qalabka ARMv5 & ARMv6 waxaa taageera.
Free version ku jira oo dhan qaababka taas waa muhiim laakiin version ku bixisay waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ka shaqeynayaan dheeraad ah oo sidoo kale ka saaraysaa xayeysiis.
Taageerada waxyaabaha hoorto sida HTTP il nool, RTSP, RTMP iwm
La jaan qaada Android 5.0 hurdiga ah
Radidiyaha si toos ah u gudbiyo xataa marka uncompressed.
Taageero kelmadaha Hardware u multi-muhiimka ah.
Sida laga soo xigtay dadka, waa ciyaaryahan aan laga cabsado maadaama ay furfuraya inta badan multimedia arrimaha la xiriira oo ay ku jiraan ciyaaro HD videos, subtitles kasoo muuqdo, doorashada ratio u filimada ee, playlists abuuro, iwm
2. VLC u android
VideoLan waa il furan, oo ah urur aan faa'iido doon ahayn oo ku salaysan France isagoo iskaa wax u qabso ee 20 dal oo kala duwan kuwaas oo ku takhasusay horumarinta multimedia. Mashruucu wuxuu soo baxay 1996 oo hadda uu yeesho waxyaabaha multimedia free hoos GPL ah.
Taageerada qaabab oo dhan oo ay ku jiraan MP4, MKV, MOV, OGG, M2TS iwm
Taageerada audio multi-track iyo subtitles.
Waxa ay u ogolaataa in ay si toos ah dhirtuba fayl.
Dib u eegida uu soo jeedinaya in ay dadka jecelyihiin inay kala soo bixi app this sababtoo ah tayada audio weyn ay, taageero buluug-ray iyo navigation file deg deg ah. Waa lacag la'aan ah iyo il furan, laakiin fiddly u isticmaala fudud.
J2 Interactive waa shirkad software oo isu horumarinta taas oo uu leeyahay khibrad oo dhinacyo badan oo kala duwan. Badidoodu waxay ku salaysan ee US iyo UK, J2 Interactive ayaa sidoo kale waxa uu siiyaa latalin iyo waxa uu leeyahay magac aasaasay bayoinformatics iyo hababka dhexgalka. Halkan, waa inaan sidoo kale app ah multimedia cabsi badan iyaga by.
Waxaa ka mid ah HW + decoder caawisaa xawaaraha hardware.
Waxa kale oo ay taageertaa multi-muhiimka ah kelmadaha.
Miyuu caruurta a xirto.
Ciyaaraa dhamaan qaabab Cinwaan.
Taageerada style qoraalka iyo midabo.
Ma aha in aad kala soo bixi codecs badan sida in barnaamijyadooda kale sababta oo ah taageero qaab weyn. HW hababka kelmadaha / SW waxaa si toos ah u wareegeen karaa video la ciyaaray, iyo waxaa jira version premium ah ad-free heli karaa sidoo kale.
4. KMPlayer (Play, HD, Video)
PANDORA.TV waxaa la aasaasay sanadkii 2004 ee Korea a video qaybsiga madal, taas oo uu leeyahay iskaashiga waxqabad ka Valley Silicon sida. Goobta tegey caalamiga ah ee 2008, oo la aasaasay ee Android, waxay la iman jireen app this multimedia waxtar leh.
Screen sabayn (Multitasking) shaqeynayaan
Cinwaan qaabab badan oo ay taageerayaan
Video gacanta ku xawaaraha loo maqli karo
Videos HD iyo 30 luqadood oo kala duwan oo ay taageerayaan
Dadka waxa ay dib u eegay sida mid ka mid ah barnaamijyadooda ay jecel yihiin multimedia sababta oo ah taageerada ee dhamaan qaabab iyo taageero codec weyn. App waxay leedahay wax badan oo ka mid ah muuqaalada waxtar leh laga heli karaa lacag la'aan ah. Laakiin xayeysiis ee version xorta ah waa arrin aad looga xumaado.
INISOFT waa shirkad Kuuriyaan ku salaysan taas oo uu ka shaqeynayay xal DRM iyo Noocyada qalabka Android ku salaysan. Lahaanshaha kor ku xusan 10 milyan oo macaamiil ah, sida shirkaddu ay ku horumartay hufan multimedia ciyaaryahan, encoder iyo DRM qalabka Android.
Taageerada gacanta xawaaraha loo maqli karo.
Taageerada qaabab badan Cinwaan.
Taageerada AVI, MOV, MKV, FLV, AVI, 3GP, 3G2, ASF, wmv, MP4, M4V, TS, MTP, M2TS qaabab video.
Waxa kale oo ay taageertaa pop-up play.
Wixii dhamaadka sare ku fikira waxaa la hooras weyn, app this isticmaali doonaa shaqeynayaan kelmadaha hardware video kaas oo lagu badbaadin karo batteriga. Laakiin qalabka tabarta yar waxaa laga yaabaa in aan si habsami leh. Version ayaa lacag la'aan ah lagu baari karaa kahor inta aanad iibsan ka mid ah lacagta caymiska.
Haaruun Turner yahay arday ku salaysan California ah ee Computer Science waa kuwa yaqaana ee internetka iyo horumarinta app mobile. CrunchKey, Stats Monitor, Trust ee Heart, TxtNote oo Trust ee Heart ayaa sidoo kale la soo saaray by Haaruun.
Ciyaari karaa music video iyo wada playlist hal.
Kuu ogolaanayaa inaad xaalkaa aad playlist halka in la isticmaalo.
Wax walba oo loo baahan yahay waa pre-raran.
Yaryar ee size.
La socon kara ku dhowaad version kasta oo android.
Taageerada kasta qaab file maqal ah iyo video.
App A weyn laakiin fudud iyo minimalistic kuwa aan rabin in ka kaaftoomi badan oo doonaya in ay leeyihiin hawsha lagu sameeyey lacagta yar ee bannaan.
CloverTek Co., Ltd kooxda waxaa la sameeyay sanadkii 2010 ee Shiinaha oo soo dhigay barnaamijyadooda multimedia u Android iyo macruufka tan iyo markaas. Waxay hit ugu weyn waa MoboPlayer ah oo u heleen sidii ay calaamaddu ku ciyaartoyda MP4 sare ee muddo gaaban.
Taageerada qaabab Cinwaan SRT, dameer, iyo SAA.
Kuu ogolaanayaa durdurrada multi-audio.
Kuu ogolaanayaa playlists iyo ciyaaro joogto ah nooca la mid ah files.
Miyuu thumbnails oo muujiyaan videos ah.
Taageerada video hoorto dhex HTTP, hab maamuuska RTSP.
Waa ciyaaryahan xoogan taas oo si hufan u ciyaara HD / HQ MKV iyo videos XVID Android,, laakiin UI ma yahay mid aad u soo jiidasho leh oo siman. Si kastaba ha ahaatee, qoreysa sida multitasking iyo playlists sameeyo iyada aawadeed.
ChangeTech waa shirkad Chinese taas oo xoogga saarta Android iyo macruufka horumarinta. Ujeeddada shirkadda waa inaad bedesho sida macluumaadka waa inay helaan oo la wadaago. Kale oo ka teknoolajiyada wireless, multimedia waa takhasuska kale ee shirkadda, waana arki in qaab RockPlayer.
Taageerada qiyaastii dhan video file maqal ah iyo qaabab.
Kuu ogolaanayaa gacanta ku tilmaam.
Taageerada geeyo network.
La jaan qaada android 2.3 iyo wax ka sareeya.
Sidoo kale waxay u ogolaaneysaa taageero TV.
Hadda ka hor laga heli karaa macruufka, RockPlayer hadda waa on Android oo u ciyaara dhow wax walba oo aan wax gubaya khayraadka badan oo qalab. Laakiin loo maqli 1080p iyo interface u baahan in la hagaajiyo.
Wondershare Waa shirkad kale oo Shiinaha oo la asaasay sanadkii 2003 iyo waxay bixisaa adeegyada boosaska badan oo duurka ku IT iyo horumarinta software ah. Joogista kooxda ka mid ah horumarinta aqoonta sare, Wondershare waa mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee software ee Shiinaha.
Ogolaaneysa inuu u ciyaaro aan mattering ku saabsan codecs.
Taageerada oo dhan qaabab Cinwaan.
Sidoo kale waxay u ogolaaneysaa online video fiirinaya.
Sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto video gaadhka ka dib.
App waxa uu leeyahay feature weyn ka ciyaaro ka DVD fayl. Interface waa wanaagsan yahay raadinaya laakiin waxaa jira kala carar yar halkan iyo halkaas.
GPCSOFT waxa ay ka shaqaynaysay tan iyo 2000, waxaana uu horumariyo barnaamijyadooda fara badan ee kombiyuutarada shakhsi, telefoonada iyo nidaamyada hardware. Tan iyo 2010, sida shirkaddu ay ku wareejiyay ay diiradda ku saabsan horumarinta Android oo ku soo kacay qaar ka mid ah danabka aad u faa'iido badan.
Taageerada tiro balaadhan oo ah qaabab file video.
Kuu ogolaanayaa qaybsi warbaahinta kooxda.
Horumarinta iyo isku halaynta.
Taageerada ciyaareed daaqadaha badan.
Shaqeynta ayaa birtiina waa pop-up waa wax fiican. Gacanta ku dareen leh iyo doorasho geeyo ka YouTube ah, iwm shaqeeyaa sida soo jiidashada ah. App Tani jaray vocal u karaoke-ing karaa marka ciyaaro video karaoke ah.
> Resource > MP4 > Top 10 Players MP4 for Android